လာအိုနိုင်ငံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရန် စီစဉ်နေ - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ပြည်သူများအား တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော Sinopharm COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် COVID-19 အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တတိယအကြိမ် (အားဖြည့်) ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အနည်းဆုံး ဆေးအကြိမ်ရေ ၇၀,၀၀၀ စာ ထိုးနှံပေးခြင်းနှင့်အတူ လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် လုပ်ဆောင်သွားရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ စိတ်ကျန်းမာရေး နှင့် ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးစင်တာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Viengkhan Phixay ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဗီယင်ကျန်း ပြည်တွင်း နေ့စဉ်သတင်းစာက ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ရှေ့တန်းတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ကူးစက်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးလူအုပ်စုဖြစ်ကြောင်း ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ COVID-19 ဝေဒနာရှင်များနှင့်အတူ နီးနီးကပ်ကပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိကြီးက ဆိုသည်။
သူတို့အနေဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေအကာအကွယ်ဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်ထားလင့်ကစား အချို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။
“ ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေဟာ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးစားပေးသူတွေပါ ၊ ဒါက …ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့ဟာ COVID-19 ရောဂါ လူနာတွေကို ပြုစုကုသတဲ့နေရာမှာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရလို့ပါပဲ” ဟု သူ(မ) ကဆိုသည်။
မကြာသေးခင်ရက်များက လာအိုနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသော လူနာသစ်အရေအတွက် နေ့စဉ် ၁,၀၀၀ ဦးခန့် ရှိနေခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ နာမကျန်းဖြစ်ပါက လူနာဆေးကုသခြင်း အပါအဝင် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလျော့သွားနိုင်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ် ခုခံပေးမည့် သူတို့၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် COVID-19 အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး (တတိယအကြိမ်) ထိုးနှံပေးရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများသည် အချိန်တိုင်းတွင် အားလုံးသော ရောဂါကူးစက်ခံရမှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ လူများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသော်လည်း အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်မှုကို လျော့ပါးစေနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ ၊ နာတာရှည်ရောဂါအခံရှိသူများ ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ ၊ စစ်သား ၊ ရဲ နှင့် အခြားသော ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသည့် လူအုပ်စုများသည် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးရရှိလာချိန်တွင် ပထမ ဦးစားပေးထည့်သွင်းစဉ်စားရမည့်သူများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းသည် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံပြည်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံရသေးသူများအနေဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ကာကွယ်ဆေးအရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေကြရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံနိုင်ရေး တောင်းခံကြရန် Viengkhan က တိုက်တွန်းထားသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို လာအိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး ဖြန့်ချိပေးထားပြီးဖြစ်ရာ ပြည်နယ် နှင့် ခရိုင်များရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် သွားရောက်ထိုးနှံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် လာအိုနိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေးပထမတစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးသူ ၃,၃၈၅,၁၄၆ ဦးရှိပြီး ယင်းတို့ထဲမှ ၂,၈၈၄,၉၀၇ ဦးမှာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေး အမျိုးသားလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, Nov.9(Xinhua) — Lao Ministry of Health will provide booster COVID-19 vaccinations for medical staff to make them better protected amid the battle against the virus.
“Doctors and nurses must be our priority for booster shots. This is because they are directly involved in the care of COVID-19 patients,” she said.
Photos- People register for China’s Sinopharm COVID-19 vaccines atavaccination center in Vientiane, Laos, June 17, 2021.
ဆီရီးယားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးက နေရာအချို့တွင် အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုအား တုံ့ပြန်